ညီလင်းသစ်: ရေ (a) Water (a) De l'eau
Posted by ညီလင်းသစ် au 13.11.08
လာဖတ်ပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်။ ကျွန်မတို့ တွေးမိဖို့ မေ့နေတဲ့ ရေအကြောင်းလေး တွေး
ထားတာ ကောင်းတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက သူ့ကိုလိုအပ်ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်။ ရေ
ရှားပါးမလောက်ငှမှူ ကို အညာဒေသရဲ့ ပူလွန်းတဲ့နွေရာသီတစ်ခုမှာကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ ရေရှားပါးတဲ့ကန္တာရ လိုနေရာမျိုးကို ဖြတ်သွားရုံနဲ့ အတော်နေရခက်တာ။ ရေမလောက်ငှစွာ
နဲ့ အကြာကြီးနေရရင် အတော်ဆိုးတယ်နော်။ “ဖေါင်စီးရင်းလည်း ရေငတ်” တတ်သေးတာ
ပဲမဟုတ်လား။ (ကျွန်မအတွက်တော့ ရေမရှိရင် ကော်ဖီဖျော်လို့ မရဖြစ်မယ်)။
ကင်မရာကပဲ ကောင်းလွန်းတာလား.. ရိုက်တဲ့ သူကပဲ တော်လို့လား... :) ပုံတွေ သိပ်ကောင်းတာ။ တတိယပုံကိုကြည့်တော့ နောက်ကအပင်တွေရဲ့အပေါ်ကို တိုးထွက်နေတာနဲ့ ရေတွေ အပေါ်ကို ပန်းထွက်နေတာက ဟာမိုနီဖြစ်နေတာ သဘောကျတယ်။ အင်းးး Art ပဲ။
I've been trying to shoot some water drops as well.
No success yet for the drops are not sharp enough. :(
Anyway5stars for second photo. :)
ဟုတ်ကဲ့မခင်ဦးမေ...ဝါးတားအကြောင်းက ဖတ်ရတာ ဝါးတားတား တော့မဖြစ်ဖူးထင်ပါရဲ့... :D
မယုဝရီရေ...ရေမလုံလောက်တဲ့ ဒုက္ခကတကယ်ကိုပဲ ဆိုးလွန်းပါတယ်၊ ဖောင်စီးရင်းရေငတ်သူတွေ ရှိသလို ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲမကျတဲ့ သူတွေလည်း ဒုနဲဒေး ပါပဲဗျာ...၊
Sin Dan Lar...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊
အမမေငြိမ်းရေ...နှစ်ခုစလုံးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...ဟီး၊ အမှန်တော့ အလင်းအမှောင်က ကိုယ့်ဖက်ခပ်ပါပါမို့ပါ၊
Everest...I totally agree with you. It ain't easy to takeaphoto of water drops. I'm not satisfied either with the first photo which could have been much better. Tks for your comment....!